Colours muGerman Lecture
Muchikamu chino chakanzi mavara eGerman, tichadzidza nezvemavara echiGerman. Tichaona mavara echiGerman neTurkey, dzidza kutaura matauro eeseti, zvinhu uye zvinhu muchiGerman.
Musoro wemavara eGerman unowanzoenderana nekuisa mumusoro, uye zvichave zvakakwana kubata nemusoro mavara anonyanya kushandiswa eGerman muhupenyu hwezuva nezuva munzvimbo yekutanga.
Sezvaunoziva, iyo mamiriro ezvinhu, iwo mavara, mafomu, manhamba, kurongeka, nzvimbo, nezvimwe. Mazwi anoratidza hunhu hwavo anonzi zvipikisheni. bhuruu peni, tsvuku chibharumu, Hot tii, kukuru tafura, kutsanya chitima, Yakakura mumitsara yakaita semugwagwa Bhuruu, Dzvuku, Inodziya, Huru, Inokurumidza, Yakakura mazwi zvipikisheni.
Zvinoreva kuti mavara zvakare zvipikisheni. Sezvo imi muchiziva, mavambo emazita akanyorwa nemavara makuru muchiGerman, ekutanga ezvipikisheni haana kunyorwa. Naizvozvo, isu hatisi kuzokoshesa ivo vekutanga kana tichinyora mavara eGerman mune mitsara. semuenzaniso bhasikoro dzvuku, bhuruu mota, yero apuro, Ndimu yakasvibirira mumashoko akadai tsvuku, zvitema, shora, girini mazwi zvipikisheni. Izvi zvipikisheni zvinoratidza mavara ezvisikwa.
German Colors Sezvo chidzidzo chichi shandiswa kazhinji muhupenyu hwezuva nezuva, ndechimwe chezvidzidzo izvo zvinofanirwa kunyatsoiswa mumusoro nekudzidza. Kana tichitaura nezvevanhu, isu tinowanzo taura mavara avo. E.g "Izvo tsvuku Ungatarisa pamuti uri padyo nemotokari here? Zvakanaka sei!","bhuruu Unogona kuunza toy iri padhuze nebhora?Tinogona kupa mienzaniso yemitsara yakaita ”.
Isu takaona muzvidzidzo zvedu zvakapfuura maitiro ekushandisa madhikisi mumitsara yeGerman uye mashandisiro ekushandisa madhikisi pamberi pemazita eGerman.
Paunenge uchidzidza musoro weruvara muchiGerman, unofanirwa kutanga wadzidza iwo akakosha mavara, ari iwo makuru mavara. Unogona kudzidza mashoma akashandiswa epakati mavara panguva inotevera maererano nezvido zvako. Semuenzaniso, isu tinogona kupa mienzaniso yemavara senge tsvuku, yero, bhuruu, chena, nhema, orenji, rima bhuruu, shava semuenzaniso weanonyanya kushandiswa mavara eGerman
Imwe nyaya yakakosha yatinofanirwa kutarisa nezvayo maererano nemavara echiGerman ndeyekuti mavambo emazita emavara anofanirwa kunyorwa mune mavara madiki.
Sezvo iwe uchiziva, mavambo emazita ese muchiGerman anodhindwa.
Mune mamwe mazwi, kunyangwe iri zita chairo kana zita rakajairika, mavambo emazita ese akanyorwa nemusoro muhana. Zvisinei, mavara haasi mazita. Makara zvipikisheni. Naizvozvo, kana uchinyora zita reruvara mumutsara muchiGerman, isu hatifanire kuwedzera mavara ekutanga eruvara. Nekuti mavambo ezvipikisheni haadi kuwedzerwa.
Zvisinei, kana tichizonyora ruvara mushure mechidimbu, kana shoko rokutanga remutsara richizova ruvara, saka sezvo mutsara wega wega uchitanga nebhii guru, shoko rokutanga remutsara rinonyorwa nebhii guru. kunyangwe riri zita reruvara kana rimwe chirevo. Yakagadzirirwa naMuharrem Efe. Iye zvino tinopa kwauri mavara edu ekuona, echiGerman, atakakugadzirira iwe:
Kupa mitsara iri pamusoro nekunyora:
Die Tomate haina kuora
Inofa Aubergine ist lilac
Die Zitrone is gelb
Tinogona kunyora muchimiro.
MuGerman, mavara kana zvimwe zvinhu zvezvinhu zvinonzi zvinoshandiswa zvinotevera nzira, sezvakaratidzwa mumifananidzo iri pamusoro:
ChiGerman Ruvara Mitsara
Mumuenzaniso wepamusoro, isu tinoshandisa chiito chekubatsira ist / sind, icho chatakamboona, sezvazviri mumitauro isinganetsi uye se sind mune mizhinji mitsara. Isu takapa ruzivo nezvenyaya iyi muzvidzidzo zvedu zvekare.
Tichafara kana iwe ukanyora yako ese maonero, mazano, zvikumbiro uye mibvunzo pamusoro wenyaya wechiGerman mavara mune edu maforamu.
Zvidzidzo zveGerman pane yedu saiti zvakagadzirirwa neshamwari dziri kungotanga kudzidza chiGerman mupfungwa, uye zvidzidzo zvedu zveGerman zvinotsanangurwa nenzira yakajeka uye inonzwisisika.
Newewo German Colors Edza kuita mitsara yakasiyana pamusoro penyaya semuenzaniso mitsara iri pamusoro.
Nenzira iyi, iwe unogona kudzidza mavara eGerman zvirinani uye hauzokanganwa nyore.
German mavara mavaraGerman mavara mavaraGerman ColorsMijeremani mavara neTurkeyGerman Turkish colorsColors muGermanyColors GermanGerman ye mivaraShona Shona Shona Colors